Shirkii ergooyinka ansixinta dastuurka Soomaaliya oo maanta Jimce ah baaqday. – Radio Daljir
Luulyo 28, 2012 3:52 b 0
Muqdisho, July 27 ? Waxaa maanta oo Jimce ah baaqday shirkii ergooyinka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ee lagu maagganaa in lagu meelmariyo dastuurka Soomaaliya, kaasoo furmay maalintii Arbacada ahayd todobaadkii dhammaaday.
Fasiraado kala duwan ayaa laga bixinayaa sababto baaqasho ee shirka, hase ahaatee madaxda dawladda federaalka, gaar ahaan kuwa wasaaradda dastuurka ayaa sheegay baaqashada shirku in ay ku qotanto cillado soo wajahay qalabkii amniga lagu sugayey, laguna baarayey dadka iyo gaadiika tagayey madasha shirkaasi uu ka socdo.
Wasiirka dastuurka dawladda federaalka Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil, oo warkaasi warbaahinta u sheegay ayaa tilmaamay dib-u-dhacaasi in uu ku egyahay oo kaliya cilladda soo wajahday agabta baarista ee lagu hubinayey dadka shirka galiya, waxaana uu intaasi raaciyey in ay gacanta ku hayaan, degdegna dib loogu hawlgalin doono.
Subaxnimadii hore ee saaka, inta aan la gaarin xilligii ergooyinku tagi lahaayeen madasha shirka, ayaa jug-qarax oo aan miisaan weynayn laga maqlay meel u dhaw xarunta shirka ee iskuul-boolisiya ee magaalada Muqdisho, taasoo fasiraadaha qaarkood ay muujinayaan in ay gundhig u ahayd amaba ay qayb weyn ka ahayd baaqashada shirka.
Sikastaba ha?ahaatee maanta waxaa lagu waday in uu socdo shirku, ayna noqoto maalintiisii saddexaad ee socoshadiisa sida ku xusnayd Jadwalka shireed ee ay horay u shaaciyeen madaxda dawladdu, waxaana hakadkaasi maalinta ahi uu luggooyo ku yahay wakhtiga la haysto ee lagu doonayo ansixinta dastuurka iyo soo xulidda baarlamaanka cusub.
Ciyaarihii Olombikada 2012 oo si rasmiya oga furmay London.